မိခင်သေဆုံးသွား၍ စိတ်ထိခိုက်နေသည့် ၉တန်းကျောင်းသူတစ်ဦး အဆိပ်သောက် သေဆုံးမှုဖြစ်ပွား ...! - APANNPYAY
Home / ပြည်တွင်းသတင်း / မိခင်သေဆုံးသွား၍ စိတ်ထိခိုက်နေသည့် ၉တန်းကျောင်းသူတစ်ဦး အဆိပ်သောက် သေဆုံးမှုဖြစ်ပွား ...!
မိခင်သေဆုံးသွား၍ စိတ်ထိခိုက်နေသည့် ၉တန်းကျောင်းသူတစ်ဦး အဆိပ်သောက် သေဆုံးမှုဖြစ်ပွား ...!
Apann Pyay 3:20 PM ပြည်တွင်းသတင်း Edit
ကရင်ပြည်နယ်၊ ကော့ကရိတ်ဆေးရုံတွင်​ ဇူလိုင်၁၂ရက်နေ့ ၁နာရီ ၄၅ချိန်​ခန့် က မိခင်သေဆုံးသွား၍ စိတ်ထိခိုက်နေသည့် ၉တန်းကျောင်းသူ အဆိပ်သောက် လူနာတစ်ဦး သေဆုံးမှုဖြစ်ပွား ခဲ့ကြောင်း သတင်းအရ ကော့ကရိတ်မြို့မရဲစခန်းမှူးနှင့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များက သွား​ရောက် ​စစ်​​ဆေးခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ​ ကော့ကရိတ်မြို့ အမှတ်​(၁)ရပ်​​နေ ဦးရင်​မြ​ရွှေ​နေအိမ်​တွင် ​​မြေးဖြစ်​သူ မ​နော်​မုသူး (၁၆)နှစ်​၊ (၉)တန်း၊ ​ချောင်း​တောင်​ အ-ထ-က တက်​​နေသူမှာ လွန်​ခဲ့​သော ၄ရက်​ခန့် က မိခင်​ဖြစ်​သူ​ နော်​ပန်းလှမှာ မိဖလိုင်း​ကျေးရွာတွင်​​ သေဆုံးသွားခဲ့ပါသည်။
မနော်မုသူးမှာ ​စိတ်​ထိခိုက်​ပြီး မိခင်​ဖြစ်​သူ​နောက်​လိုက်​မည်​ဟု ​ပြောဆို​နေသဖြင့် စောင့်​ကြည့်​​နေစဉ်​​ ဇူလိုင်လ ၁၁ရက်နေ့ ၂နာရီအချိန်​ခန့်က မနော်​မုသူးမှာ ​နေအိမ်​အိပ်​ခန်းအတွင်း ပလပ်​စတစ်​ဘူးဖြင့် ထည့်ထား​သော မြက်​သတ်​​ဆေး​သောက်​၍ ​အော့အန်​​နေသဖြင့် ကော့ကရိတ်ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ ပို့​ဆောင်​ပြီး ဆေးကုသခဲ့ပါသည်။
ဆေးကုသုနေစဉ် ဇူလိုင်လ ၁၂ရက်နေ့ ၂နာရီ၃၀ မိနစ်အချိန်​ ​သေဆုံးသွားခဲ့​သဖြင့် ကရိတ်မြို့မရဲစခန်းမှ သေမှုသေခင်း ဖွင့်လှစ် စစ်ဆေးလျှက်ရှိကြောင်း ကရင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ ၏ သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရပါသည်။
Credit: Thit Htoo Lwin
ကရငျပွညျနယျ၊ ကော့ကရိတျဆေးရုံတှငျ ဇူလိုငျ၁၂ရကျနေ့ ၁နာရီ ၄၅ခြိနျခနျ့က မိခငျသဆေုံးသှား၍ စိတျထိခိုကျနသေညျ့ ၉တနျးကြောငျးသူ အဆိပျသောကျ လူနာတဈဦး သဆေုံးမှုဖွဈပှား ခဲ့ကွောငျး သတငျးအရ ကော့ကရိတျမွို့မရဲစခနျးမှူးနှငျ့ တပျဖှဲ့ဝငျမြားက သှားရောကျ စဈဆေးခဲ့ကွောငျး သိရပါသညျ။
ဖွဈစဉျမှာ ကော့ကရိတျမွို့ အမှတျ(၁)ရပျနေ ဦးရငျမွရှနေအေိမျတှငျ မွေးဖွဈသူ မနျောမုသူး (၁၆)နှဈ၊ (၉)တနျး၊ ခြောငျးတောငျ အ-ထ-က တကျနသေူမှာ လှနျခဲ့သော ၄ရကျခနျ့က မိခငျဖွဈသူ နျောပနျးလှမှာ မိဖလိုငျးကြေးရှာတှငျ သဆေုံးသှားခဲ့ပါသညျ။
မနျောမုသူးမှာ စိတျထိခိုကျပွီး မိခငျဖွဈသူနောကျလိုကျမညျဟု ပွောဆိုနသေဖွငျ့ စောငျ့ကွညျ့နစေဉျ ဇူလိုငျလ ၁၁ရကျနေ့ ၂နာရီအခြိနျခနျ့က မနျောမုသူးမှာ နအေိမျအိပျခနျးအတှငျး ပလပျစတဈဘူးဖွငျ့ ထညျ့ထားသော မွကျသတျဆေးသောကျ၍ အော့အနျနသေဖွငျ့ ကော့ကရိတျပွညျသူ့ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောငျပွီး ဆေးကုသခဲ့ပါသညျ။
ဆေးကုသုနစေဉျ ဇူလိုငျလ ၁၂ရကျနေ့ ၂နာရီ၃၀ မိနဈအခြိနျ သဆေုံးသှားခဲ့သဖွငျ့ ကရိတျမွို့မရဲစခနျးမှ သမှေုသခေငျး ဖှငျ့လှဈ စဈဆေးလြှကျရှိကွောငျး ကရငျပွညျနယျရဲတပျဖှဲ့၏ သတငျး ထုတျပွနျခကျြအရ သိရပါသညျ။